Datenschutzerklärung (UK) | Safidy USA
Ity fanambarana momba ny fiainana manokana ity dia nohavaozina farany tamin'ny 17 Jolay 2020 ary mihatra amin'ny olom-pirenena avy amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Raha tsy afa-po amin'ny fomba iatrehana (fitarainana momba) ny fanodinana ny angon-drakinao manokana ianao, manan-jo hametraka fitarainana any amin'ny biraon'ny Kaomisera momba ny vaovao ianao:
9. Mpiaro ny fiarovana data
Ny tompon'andraikitra momba ny fiarovana ny data dia efa voasoratra anarana amin'ny biraon'ny Kaomisera momba ny fampahalalana. Raha manana fanontaniana na fangatahana momba an'io fanambarana momba ny tsiambaratelo io ianao na ho an'ny mpiaro ny data dia afaka mifandray amin'i Helmut Melzer, amin'ny alàlan'ny office@dieoption.at.
Ny tranokalanay dia tsy natao hisarihana ny ankizy ary tsy tanjonay ny manangona angon-drakitra manokana amin'ireo ankizy eo ambanin'ny vanim-potoanan'ny fanekena ao amin'ny firenena onenany. Noho izany dia mangataka izahay fa ny zaza tsy ampy taona dia manaiky tsy hampiditra data anay manokana.
11. Ny antsipiriany momba ny fifandraisana